Ma i tusi kartaa sida aan ugu guuleysto Amazon iyadoo la adeegsanayo xogta raadinta ee tartamayaasheyda?
Haa, taasi waa su'aasha saxda ah. Waxaan ula jeedaa marka saxda loo isticmaalo, xogta Amazon raadinta xogta ay kuugu dhow ama qaybaha kooxuhu waxay noqon karaan nidaamkaaga tooska ah ee guulaha ganacsiga ugu weyn ee halkaas ka jira. Waxaan shakhsiyan aaminsanahay in fure u ah natiijooyinkaaga ganacsi ee ugu sarreeya markasta waxaa laga heli karaa inta badan caqli-celinta caanka ah ee ereyada caanka ah ee caanka ah ee ay isticmaalaan dukaamada nool, oo ay weheliso istaraatejiyad sir ah oo dabacsan. Waxyaabahani waa in shaqada oo dhan ay si fudud u noqon karto hal piece oo cake ah - dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad heshaa qalabka saxda ah ee ku shaqeynaya cilmi baaris haboon oo ugu dambeyntii noqoto guul weyn ee Amazon oo kaliya isticmaalaya xog raadinta ee tartamadaada - chapter 7 lawyer pennsylvania. Sidaas darteed, tixgelinta in arrinta ugu adag ee halkan ay tahay in la helo xal dhamaystiran oo ka dhexjirta tirada dhabta ah ee dalabyada kala duwan ee laga heli karo internetka. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo inaan kuu tuso qalabkayaga software-ka ugu fiican si aan u sahlanaado - labadaba cilmi-baarista muhiimka ah ee tartanka, habka ugu wanaagsan ee fursadaha raadinta fursadaha loo yaqaan 'kickstart', iyo xalalka qiimaha jaban ee loo baahan yahay si looga dhigo hogaaminta niche ama qaybta wax soo saarka.
Dhaqdhaqaaqa Kacbada Laga bilaabo Bilowga Bilawga
Aan ku bilaabo fursadaha bacdamaa Amazon oo leh xog raadis ah oo ku saabsan alaabooyinka ugu baahida badan, iyo heshiisyada ugu kulul ee laga helo suuqa. Halkan waxaa ah marka qalabka JungleScout uu yimaado ciyaar! Software noocan ah waxaa loo yaqaanaa xulashada ugu fiican ee cilmi-baarista xogta loo baahan yahay si loo helo fursadaha iibsadaha fursadaha ee Amazon, helitaanka sheyga ugu wacan ee rajeynaya in lagu daro liiskaaga wax soo saarka hadda. Waxa kale oo aad u fudud - si fudud ayaad u noqon kartaa hawsha dhabta ah ee adkaa si aad ula socoto habka muhiimka ah ee ka soo horjeeda guulahaaga si aad u nidaamsan oo hab fudud oo u soconaya hab isku dhow.
Ka dhigo Nidaamyada Wanaagsan ee Wanaagsan iyo Tilmaamaha Qodobbada Key Words
Xariirka waa qalab kale oo cajiib ah si aad u hesho sawir weyn oo ah raadinta Amazon, xog farsamo oo ku saabsan keywords caanka ah ee ugu caansan ee hadda lagu taliyay liiskaaga, iyo sidoo kale malaha fikradda ugu qiimaha badnayd ee ku saabsan ereyada muhiimka ah iyo ereyada raadinta dheer-dheer raadiyahaaga horay loo soo doortay. Maxaa ka sii badan - Waxaan heley xoojinta xitaa awood badan marka ay timaado higsiga ololaha PPC ee waxtarka ugu sarreeya. Dhamaantiis, qalabkani wuxuu iga caawiyay wax badan maaraynta khatarta, sababtoo ah qiyaasta xogta la isku halleyn karo oo sax ah ee qiyaasta faa'iidada, dakhliga bil kasta, xawaaraha iibka, dakhliga netka ee FBA ka dib, iwm
Faa'iido Ka Sarreysa Qiimeeynta Qiimeenta ah ee Xisaabinta iyo Istaraatijiyada Iskuduwidda
Qodobka ugu danbeeyay ee aan rabo in aan kuu muujiyo maanta waa Keepa. Waa hab sahlan oo sahlan oo loo maareyn karo qiimaha qalabka Amazon. Waa isugeyn nadiif ah oo cad oo ku dhawaad ​​is-sharaxan. Si kastaba ha ahaatee, aan u qoro sifooyinka muhiimka ah ee ay ku ballanqaadeen Tuta software qiimaha - ugu yaraan sababtoo ah dhamaystirka. Qaar ka mid ah kuwa kale, tracker qiimaha ayaa kaa caawin kara taariikhaha isku-duwidda ee isku-dhafan ee lagu soo bandhigay hab ku salaysan qaabsocodsiinta, digniinaha dhabta ah ee qiimaha hoos u dhaca / kor u kaca iyo isbedelada helitaanka, aragti sahlan oo toos ah oo la heli karo iyada oo loo marayo fidinta korriinka, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, si aad u aragto heshiisyada ugu dambeeyay ee Amazon iyo isbarbardhig qiimaha ku dhowaad marnaba.